प्रियंकाले एक्कासी छाडेपछि ‘भारत’मा हिरोइन छान्नै समस्या ! | Screennepal
प्रियंकाले एक्कासी छाडेपछि ‘भारत’मा हिरोइन छान्नै समस्या !
२०७५, १३ श्रावण आईतवारscreennepalbollywood, feature0
बलिउड फिल्मका निर्देशक अली अब्बास जफरको फिल्म ‘भारत’मा हिरोइन को राख्ने भन्ने कुराले निर्माणपक्षबीत बहस नै निम्ताएको छ । उक्त फिल्मका लागि मूख्य अभिनेत्रीमा अनुबन्धित प्रियंका चोपडा एक्कासी बाहिरिएपछि ‘भारत’मा हिरोइनको समस्या निम्तिएको हो ।
अभिनेता सलमान खान स्टारर ‘भारत’मा प्रियंकाले अन्त्यमा आएर काम गर्न इन्कार गरेकी छन् । फिल्ममा प्रियंका सलमानको अपोजिट भूमिकामा अनुबन्धित थिइन् । तर, फिल्मबाट प्रियंका ब्याकआउट भएसँगै उनको अब उनको स्थानमा कुन अभिनेत्रीलाई लिने ? निर्माणपक्षले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
प्रियंका फिल्मबाट बाहिरिने लगत्तै सबैभन्दा पहिले कट्रिना कैफको नाम आएको छ । कट्रिना ‘भारत’मा सलमान साथ देखिने हल्लासमेत चल्न थालेको छ । कट्रिना सलमानसँग अनस्क्रिन अपियरेन्स गर्न रुचाउँछिन् पनि । अली अब्बासले पनि प्रियंकाले छाडेपछि उनको स्थानमा कट्रिनालाई नै पहिलो नम्बरमा राखेको बताइन्छ । उनलाई लाग्छ, सलमान र कट्रिनाको ट्यूनिङ मिल्छ । सलमानको रोजाइमा पनि कट्रिना पर्छिंन् । तर, कट्रिना नै हुन्छिन् भन्ने निश्चित छैन ।
कट्रिनापछि सलमानलाई जैकलिन फर्नाडिजलाई पनि रुचाउँछन् । त्यसैले यदि कट्रिनासँग कुरा मिलेन भने ‘भारत’मा जैकलिन सलमानसँग देखिनेछिन् । पछिल्लो साचमार अनुसार जैकलिनको बारेमा निर्माताले विचार गरिरहेको छ । निर्देशक अब्बासले पत्रकारहरुसँग भने, ‘जैकलिन पनि हुनसक्छ ।’
कट्रिना र जैकलिनपछि ‘भारत’का लागि अभिनेत्री अनुषका शर्माको पनि नाम सुचीमा छ । समाचारमा बताइएअनुसार ‘भारत’मा यदि कट्रिना र जैकलिन पनि भएन भने अनुष्का पक्का हुनेछिन् । अनुष्का हालैमात्र सलमानसँग फिल्म ‘सुल्तान’मा देखिएकी थिइन् । निर्माणपक्षले ‘भारत’का लागि अन्तिम विकल्प अनुष्कालाई लिएको छ । प्रियंकाले फिल्म छाडेपछि निर्माता निखिल नमित भने चिढिएका छन् । उनले प्रियंकाले अचानक फिल्म छोड्नुलाई ‘अनप्रोफेशनल’ भनेका छन् ।
Previous Postललितपुरकी सीमाले जितिन् उपाधिसँगै स्कुटर Next Postदर्शक माझ यस्तो रुपमा आउदै मोडल पदम लामा, कल्पना गुरुङ संग प्रेममा डुब्दै